Shiinaha Laryngeal Mask Airway (Xoojiyay) warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Biotek
Wadada maaskaro ee Laryngeal mask (waa la xoojiyay)
Marinka mareenka Laryngeal waa marin hawo mareenka supraglottic oo ay soo saartay Archie Brain, MD isla markaana lagu soo kordhiyay xarun caafimaad 1988. Dr. Marinka hawo-mareenka laryngeal wuxuu si weyn u wanaajiyey raaxada iyo amniga maaraynta marin-haweedka adduunka oo dhan.
Mowjadaha hawo-mareenka la xoojiyey ee hawo-mareenka ayaa ah mid jilicsan oo leh silig wareega oo cufan leh oo ku dhex jira tuubada weyn, oo aan il-biriqsi lahayn.
Lambarka alaabta: BOT108001
Codsiga: waxaa loo isticmaalaa suuxdinta kiliinikada, gargaarka degdegga ah iyo bukaanada u baahan inay si dhakhso leh u abuuraan kanaalka neefsashada inta lagu jiro dib u soo nooleynta.
Cabir: 1 #, 1.5 #, 2 #, 2.5 #, 3 #, 4 #, 5 #
1.Waa isticmaalka keliya;
2.Dhammaan cabirrada loo heli karo bukaanada culeys kasta ha lahaadee;
3. 100% maadada silikoon ee heerka caafimaadka;
4. Tuubbo jilicsan oo silikoon ah oo leh silig silig ah oo silig ah oo qalinjebin ah oo gudaha ku jira, oo aan jibbaar iyo burburin lahayn.
Way fududahay in la isticmaalo waxayna si dhakhso leh u dhisi kartaa hawo mareenka macmalka ah
Looma baahna in la isticmaalo laryngoscope iyo murqaha nasteexo
Ka fogow dhaawaca xargaha codka adigoon soo marin marinka codka
Marka la barbardhigo qalliinka 'endotracheal intubation', hawo qaadashada LMA ayaa saameyn yar ku leh hemodynamics iyo dhibaatooyin yar oo qalliinka ka dib ah
Dhammaan noocyada bukaanku waxay u baahan yihiin inay abuuraan hawo mareenka macmalka ah. Daaweynta degdegga ah ee samatabbixinta bukaannada qaba neefsashada. Dib u soo kabashada masiibada ee shilka masiibada.
Maaskarada loo yaqaan 'Laryngeal mask' ee loogu talagalay isticmaalka caafimaadka - nooca caadiga ah
Ujeedo ah in lagu qiimeeyo kiisaska adag ee qalliinka endotracheal.
Ku daweynta jirka qalaad dhuunta neef mareenka iyo baaritaanka qaaska ah ee trachea iyo lary
Ku saabsan xakamaynta tayada
Tayadu waa nolosha warshaddii BIOTEK. Waxaan ku leenahay kormeere boosteejo kala duwan, waxaana jira dhowr kormeere ka hor inta aysan xirxirin si ay u helaan alaab tayo leh.
Hore: Wadada Hawada Laryngeal (PVC)
Xiga: Laryngoscope la tuuro
La tuuro Video Laryngoscope ee Qaaxada
Laamiga lakabka lumen double lumen la marsado marinka hawada a ...
Caafimaadka Fasalka PVC Endotracheal Tube oo leh suctio ...
Baarista heerkulka la tuuro iyo SPO la tuuro ...
Top-qeybiyeyaasha Shiinaha PVC PVC sanka hawada / Nasophary ...